** အကောင်းဆုံး ** အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲခြင်း! - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
** အကောင်းဆုံး ** သက်ရောက်မှုများအတွက် positive ေူပာင်းလဲရေးကို!
အစအဦးပု 10th အချိန်အကြောင်းကိုအဘို့ဤ NoFap စွန့်စားမှုအဖြစ်ငါဝမ်းသာပါတယ်လိမ့်မယ်ထင် ရလဒ်တိုးမြှင့်! လှုံ့ဆော်မှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ငါ 90 နေ့ခံမှုစိနျချေါမှုနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ငါကပိုပြီးပျော်ရွှင်, လုံ့လရှိသူ, စည်းကမ်းလူတစ်ဦးဖြစ်လာကူညီပေးပါမည်သောငါ၏ 90 တစ်ရက်ကာလအတွင်းအများအပြားလှုပ်ရှားမှုများပြုလိမ့်မည်။ သူတို့ခြောအသက်တာ၏သင့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်ကတည်းကငါသည်သင့်ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာသည်ဤလုပ်နေတာအကြံပြုပါသည်။
1 ။ အပြုသဘောစဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့ reframing ၎င်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒါကိုမင်းဒီလိုလုပ်တယ် - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ထဲကိုအပျက်သဘောအတွေးဒါမှမဟုတ်ခံစားချက်ရောက်သွားတဲ့အခါအဲဒီအတွေးကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ဂူဂဲလ်ကိုသင်ကဘာလဲဆိုတာမသိလျှင်ပြန်လည်ပြုပြင်သည် - သင်ပြaနာတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါက၎င်းကိုလက်ခံပြီးပြproblemနာကိုယ်နှိုက်အစားဖြေရှင်းနည်းများကိုအာရုံစိုက်ပါ။ - သင်သည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးသောအခါကောင်းသောအပြုအမူတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးပါကမိမိကိုယ်ကိုအကောင်းမြင်အတွေးဖြင့်ဆုချပါ။ ဒါကိုဘယ်သူလုပ်နိုင်မှာလဲ” ဘယ်တော့မှမအစဉ်အဆက် သင်တစ်ခုခုပျက်ကွက်ပြီးတာနဲ့သင်ကိုယ်တိုင်အပျက်သဘောပြောပါ ဒါကဘာမှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်ပါ။ - အခြားသူများအားမကောင်းသောအရာများကိုမစဉ်းစားပါနှင့်။ ဒါဟာသင့်ကိုဒေါသထက်ပိုပြီးဘာမှမပေးပါဘူး
2 ။ အတည်ပြု အတည်ပြုချက်များသည်သင်ရွတ်ဆိုထားသောသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားသောအပြုသဘောဆောင်သောဖော်ပြချက်များဖြစ်သည်။ သင်ပိုမိုလုပ်လေ ဦး နှောက်သည်ထိုသတင်းများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်လေလေဖြစ်သည်။ ကတိသစ္စာပြုခြင်းသည်ဤပုံစံကိုကြည့်နိုင်သည်။ (သို့)“ ငါ ၉၀ ရက်စိန်ခေါ်မှုကိုပြီးမြောက်လိမ့်မယ်” ။ ကျွန်ုပ်၏ကတိသစ္စာကိုနံနက်ယံ၌ပထမဆုံးအကြိမ်အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်နှင့်ညနေခင်း၌အိပ်မပျော်မီနောက်တစ်ခါထပ်မံပြောကြားသည်။ ငါသည်လည်းတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ချရေးပါ။ ကတိသစ္စာပြုချက်များသည်သင့်အပေါ်ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ် Self-hypnosis ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤတွင် Self-hypnosis အပေါ်ကောင်းတစ်ဦးဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ အတည်ပြုချက်ကိုဤနည်းဖြင့်ဖန်တီးပါ - တိုတောင်းသော၊ တင်းမာသောဝါကျကိုသုံးပါ။ အမြဲတမ်း“ ငါပါ .. ” ကိုသုံးပါ၊ - ဘယ်တော့မှမ မတူတဲ့အနှုတ်လက္ခဏာကိုသုံးပါ၊ “ ငါမ fap မဟုတ်ဘူး” သတိလစ်သောစိတ်သည်“ not” ကိုနားလည်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲ“ ငါ fap” ကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ ရလဒ်ကတော့သင်လိုချင်တာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ - အတည်ပြုချက် ၁၀ ခုထက်မပိုစေပါနှင့်။ - ရှုပ်ထွေးသောစကားလုံးများကိုမသုံးပါနှင့်။ ကတိသစ္စာပြုမှုကိုနားလည်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလေလေ၊
အောက်ပါအချက်များမှာ - ၁။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်သည်။ ၂။ ငါလိုချင်တာကိုလုပ်နိုင်တယ်။ ၃။ ငါပျော်ရွှင်ပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသည်။ ၄။ ကျွန်ုပ်ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ ၅ ။
3 ။3အပြုသဘောအမှုအရာအိမ်ခန်း ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ညတိုင်းသင့်ကိုပျော်ရွှင်စေသည့်အရာများ (သို့) လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီသင်ခံစားခဲ့ရသောအရာ ၃ ခုကိုစာရင်းပြုစုပါ။ ၎င်းသည်လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးအစွမ်းထက်သည်။ - သင့်စာရင်းတွင်မည်သည့်အရာမဆိုပါဝင်နိုင်သည်။ သငျသညျခဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်ပါတီ, ဒါမှမဟုတ်နံနက်ယံ၌အရသာရှိတဲ့ကော်ဖီခွက်ကို။ သီချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုသင်နားထောင်ကောင်းကြားဖူးလိမ့်မယ်။ - နေ့စဉ်အသစ်သောအရာများရေးရန်အရေးကြီးသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကသင့်ကိုဘာရလဒ်မှပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ - မသာရေးပါ ဘာ သင်တစ်နေ့တာအတွင်းကြိုက်တယ်, ဒါပေမယ့် အဘယ်ကြောင့် သင်ကကြိုက်တယ်။ သငျသညျနှိမ့်ချရေးသားခဲ့သည်အရာတို့ကိုဖြစ်ပျက်ဘာဖြစ်လို့လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးကြည့်ပါ။
4 ။ သတိသမ္ဘာဝနာ ထွက်ရှိတရားအားထုတ်ဘို့ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များ alot ရှိပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ အဘယ်ကြောင့်? သင်ယခု၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ယခုအချိန်တွင်ပိုမိုအသိအမြင်ကိုပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ သငျသညျအစားနောက်ပိုင်းမှာအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကို၏အာရုံစူးစိုက်၏, ထိုအခိုက်အဘို့အသွားဘာများပိုပြီးသတိထားပါ, ဒါမှမဟုတ်မနေ့ကဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။ ငါအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နေ့တစ် 10 သို့မဟုတ် 20 မိနစ်စိတ်ထဲ session တစ်ခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်နှစ်ကြိမ်။ ငါ CD ကိုကျေးပဲ့ထိန်းအစည်းအဝေးများတယ်, ဒါပေမယ့်ငါတွေ့သောအစာရှောင်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူ ဤ google အပေါ်လမ်းညွှန်။ ဒါဟာအခြေခံကိုဖုံးလွှမ်းရန်ပုံရသည်။ ဒါပေမယ့်ငါလမ်းညွှန်တရားကိုတွေးတောဆင်ခြင်ဖို့လည်းအကြံပေးလိုပါတယ်။
5 ။ တံခါးအလေ့အထ ဤသည်တစ်ဦးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သတိရနှင့် execute ရန်လွယ်ကူ။ သင်တစ်ဦးတံခါးမှတဆင့်လမ်းလျှောက်တိုင်းအချိန်, ကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းတစ်ဦးကိုယ်ဟန်အနေအထားပေးနှင့်သင့်မျက်နှာပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ပြုံးစေ။ သငျသညျပြုံးအခါတိုင်း, သင့်ဦးနှောက်ကိုသင်ပျော်ရွှင်စေမည်ဖြစ်သော serotonin လွှတ်ပေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကနေ့စဉ်ဝမ်းနည်းမှုကနေဝေးစောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
6 ။ Kegels သင်၏အထုပ်ကိုအသုံးမပြုစဉ်ကျန်းမာစွာထားရန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ကြွက်သားများတည်ဆောက်ရန်အထောက်အကူပြုသောကောင်းမွန်သော kegel လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုချမှတ်လိုက်ပြီးခြောက်သွေ့ခြင်း (သို့) အပြန်အလှန်အော်ဂဇင်ပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ သင် PE မှခံစားနေရပါက၎င်းသည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ ထိုအခါမူကား၎င်းသည် kegels မဟုတ်ပါ ပြောင်းပြန် kegels။ ၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးသင့်ကိုတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကိုသက်သာစေပြီးတင်းမာမှုလျော့နည်းစေသည်။ PE မကြာခဏတင်းတင်းတင်ပါးဆုံရိုးကြမ်းပြင်၏ရလဒ်ဖြစ်သောကြောင့်ဤသည်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ သင်နှင့်ကိုက်ညီသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။ PE မှသင်ခံစားရလျှင် kegel များများမသုံးပါနှင့်။ အဲဒီအစားပြောင်းပြန် kegels အာရုံစိုက်ပါ။ သင်ဤအရာအားလုံးကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ
7 ။ Reading စာအုပ်များ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကိုကျန်းမာစေဖို့စာအုပ်တွေစဖတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးစီးပွားများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါ၊ သင်နှင့်လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ကတစ်ရက်မှာအနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ ဖတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါ X ရက်စွဲတိုင်အောင်ဖတ်ရန်ရှိသည်ဘယ်နှစ်ယောက်စာမျက်နှာများအတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်လည်းချမှတ်ထားပါတယ်။ ငါလုပ်နေတာနောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတီဗွီ (သို့) ကွန်ပျူတာအပြင်တခြားအရာတွေကနေလှုံ့ဆော်ခံရဖို့ဖြစ်တယ်။ မင်းစာဖတ်နေတုန်းပဲ၊ တက်တက်ကြွကြွ ဆွအစားတီဗီ၏လတ်တလောတွင် infront လာပြီ။
8 ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို set up လှုံ့ဆော်မှုရရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှာသင့်လျော်သောပန်းတိုင်များချမှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်သောအခါသင်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာသင်သည်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်သက်သေပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒါဟာအရမ်းကိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သူတို့ကိုအစ ဦး ၌သေးငယ်အောင် ထား၍ အခက်အခဲများကိုအချိန်နှင့်အမျှတိုးမြှင့်ပါ။ သင်၏ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်သမိုင်းမှတ်တိုင်သို့ရောက်သောအခါသင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုဆုချပါ။ Ehm, ငါသည်ခဲအချိန်ငါနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆုချသင့်တယ်ဘယ်အရာကိုထွက်ရှာဖွေရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်သည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များတယ်လျှင်, သူတို့ကို post ကျေးဇူးပြုပြီး!
ငါသညျဤလူအပေါင်းတို့သည်ယခုအဘို့ခဲ့ထင်ပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အဆိုပါ PMO တိုက်ခိုက်နေသိမ်းဆည်းထားပါနှင့် 90 ရက်ရောက်ရှိဖို့! သငျသညျ, ပျြောရှငျခံစားရပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိသည်နှင့်သင်ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်ပိုကောင်းအသက်ရှင်နေထိုင်မည်!